Nidaamka Kaadhka Korantada ee Elektiroonigga ah ayaa Imaanaya | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKaarka EGO ee Caasimadda ayaa ku dhuftay Electronic Smart Card System
10 / 02 / 2013 06 Ankara, GUUD, Headline, TURKEY
Ankara, kaararka EGO ee loo adeegsaday basaska degmada, Ankaray iyo metro waa taariikh. Kaararkaani waxaa lagu beddeli doonaa 'Nidaamka Ururinta Xawaaladda Elektiroonigga ah', oo ah codsi la mid ah nidaamka kaararka elektiroonigga ah ee loo adeegsado gaadiidka dadweynaha ee Istanbul. Ayadoo la kaashanayo kaararka elektiroonigga ah, maal-gashadeyaasha ayaa awoodi doona inay si sahlan ugu safraan iyagoo soo dejinaya lacag badan inta ay rabaan inay ka takhalusaan dhibaatada raadinta tikidhada.
Dawlada hoose ee magaalada Ankara maalmaha soo socda waxay noqon doontaa hindise muhiim ah oo lagu caleemo saarayo dadka deggan. Agaasinka Guud ee Gaaska Korontada iyo Shirkad Baska ah (EGO), 5 Maarso 'Gaadiidka Dadweynaha ee Elektaroonigga ah ee Gawaarida, Raadinta Gawaarida Gawaarida, Kaameeraha iyo Nidaamka Saldhigga Sirdoonka Qalabka Rakibaada iyo Howlgalka Meheradda' ayaa jilcan. Shirkadda waxay heli doontaa qandaraaska lagu qabanayo hoolka shirarka ee guddiga fulinta ee agaasinka guud ee EGO. 10 milyan 186 kun 906 TL + VAT, shirkadaha kaqeybgalaya qandaraaska waa inay siiyaan 712 (3 million 5 kun 607 TL) oo ah bond bond. ugu yaraan 201 diyaar u yihiin in ay ka qayb dhaylo ah ee hawlgallada gaadiidka dadweynaha ee Turkey, degmada waa in ay ahaadaan ugu yaraan xnumx'ş sano ka dhigay işletmenlig nidaamka electronic ururinta toll.
Basaska dawlada hoose, nidaamka gaadiidka xadiidka (ANKARAY iyo metro) iyo gawaarida kale ee gaadiidka dadweynaha ee gacanta ku haya nidaamka lacag aruurinta ee la isticmaalay, 'Nidaamka aruurinta Canshuuraha Elektiroonigga' ayaa la beddeli doonaa. Kaararka EGO waxaa lagu beddeli doonaa 'Smart Card'. Nidaamka tigidhada cusub ee loo diyaariyey sidii Smart Card, tigidhadu wax xiriir ah lama laha mashiinka sida Akbil ee Istanbul. Waa ku filnaan doontaa in la tuso mishiinka si rakaabku ugu raaco gaadiidka dadweynaha waqti gaaban gudahiisa. Nidaamka ka sokow, baabuurta gaadiidka dadweynaha 'kaararka smart', iyo sidoo kale kaararka deynta 'Kaararka Dit' waxaa la siin doonaa fursad ay ku raacaan.
Intaa waxaa u dheer, baaxadda nidaamka gaadiidka dadweynaha, nidaamka 'smart Stop' ayaa la bilaabi doonaa. Rakaabka ayaa lagu ogeysiin doonaa wadada. Nidaamka kamaradda ayaa lagu rakibi doonaa gaariga. Codsiyada Kaararka Baskent, nooca kaarka deynta, sida carwooyinka, garoomada, baarkinka iyo xisaabiyeyaasha horay loo bixiyay, sida meelaha lacag bixinta ayaa loo qaban doonaa inay ansax yihiin.
EGO BASES WAA IN AY SAMEEYAAN 3 MILKIIL KILOMETERS Waqti SANO
Waxaa jira wadarta 2 kun oo 18 EGO ah oo u adeega dadka deggan Ankara. Basaska EGO, oo sameeya celcelis ahaan celcelis ahaan 9 kun oo kiiloomitir maalin walba, waxay ka sameeyeen isku-darka 2012 milyan 3 kun 213 kiiloomitir 758.
Celcelis ahaan celcelis ahaan 600 kun oo qof ayaa doorbiday basaska EGO sanadkii hore waxay qaadeen 213 milyan 967 kun oo 430 rakaab ah. Basaska EGO ee Ankara waxay qaadaan wadarta guud ee rakaabka xNUMX rakaabka xNUMX barta safarka ee gobolka 5. 55 bin 375 way furan tahay oo bin 3 wuu xidhan yahay. Waxaa sidoo kale jira basas dowladeed oo gaar loo leeyahay iyo xNUMX gaadiid dadweyne oo gaar loo leeyahay oo ku yaal gobolka 729. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira khadka Ankaray (A614) Dikimevi-AŞTİ oo dhererkiisu yahay kiiloo mitir 5 iyo saldhigga 343 ee caasimadda iyo Ankara Metro (M4) Khadadka Nidaamka tareenka ee Kizilay-Batıkent oo leh dherer dherer kiilomitir 200 ah. 380, 8,5 milyan 11 kun 1 ayaa lagu raray iyada oo loo marayo khadka A14,6 iyo 12 milyan 1 milyan 2012 kun 37 kun 862 kun 314 kun oo ah nidaamka tareenka rakaabka.
70 Sannadlaha Xilliyeedka Taariikhda
Nidaamka Diiwaangelinta Mashiinka Maqalka
40 ee Marmaris
Anker ayuu yiri:
Qandaraasluhu wuu dhammaaday e-magaalada oo lasiidhay hindisada